पुलुक्क | मझेरी डट कम
HomSuvedi — Mon, 03/27/2017 - 15:49
‘यिनीहरूले हामीहरूलाई नेहेरी नहुने के कुरा होला हँ ? फर्किफर्की हेर्छन् । नहेरी सक्तैनन् ! एउटाले पनि हेर्छ, अर्काेले पनि हेर्छ....!’
मेरी श्रीमती हिंड्दाहिंड्दै मलाई भन्छिन् । यसको कारण मैले उनसँग सोधें । कारण के रहेछ भने हामी दुई जना बाटामा कतै हिंडेर जाँदै गर्दा विपरीत दिशाबाट आएको युवकले उनलाई पुलुक्क हेरिदिएछ । उनका अघि भन्नु भने हुन्न तर म पनि त्यही युवकको जस्तो ता छु नि ! म पनि उसैको जस्तो गरी विपरीत दिशातिरबाट कुनै युवती आउँदै गरेकी भेटिई भने मेरी उनका आँखा बचाएर पुलुक्क हेर्दछु— दुई विपरीत दिशातिरबाट आएका कमिलाहरूले हरेकसँग मुखामुख गरेजस्तो । त्यो युवक हाम्रो अघिबाट पछि पर्नासाथ मेरी श्रीमतीको प्रतिक्रिया थियो माथिको वाक्य ।
‘के भनेको त्यस्तो ? सुन्छ !’ मैले भनें । तर मलाई पनि युवकको त्यो भाका मन पर्छ । अनि मैले मेरी श्रीमतीलाई अगाडिपट्टिबाट हेर्ने र हाम्रा पछि परिसकेको त्यस युवकलाई हिंड्दाहिंड्दै पछाडि फर्किएर हेरेें । ऊ मेरै श्रीमतीको पृष्ठभाग हेर्दै रहेछ, हिंड्दाहिंड्दै पछि फर्किएर । मैले उसलाई हेरेपछि उसका र मेरा आँखा जुधे । उसले मुन्टो बटारेर आफ्नो गति लियो हामीले पनि आप्mनो गति लियौं । आफ्नोआफ्नो बाटो लाग्यौं । त्यहाँको कुरा यत्ति हो । आफ्नो आफ्नै बाटो लाग्नु नै त मानवजीवनको वास्तविकता हो ।
यस घटनाबाट म आफैंतिर फर्किएँ । आप्mनै इतिहासतिर फर्किएँ । खोइ कताकताबाट हो, मेरो युवाकालको स्मृति मलाई झल्याँस्स भएर आयो । म पनि त ऊ बेला (ऊ बेला मात्र के भन्ने ! आज पनि) त्यही प्रकारको र त्यही प्रवृत्ति भएको मान्छे हँु नि ! ऊ बेला पनि त्यही प्रवृत्ति र अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति कायमै छ । मैले पनि यदाकदा हिंड्दा वा अन्यत्र कतैतिर अपरिचत वा परिचित युवतीहरूका साथ जम्काभेट हुँदा उनीहरूलाई छलेर नजानिदो गरी उनीहरूको आकृतिलाई पुलुक्क हेर्ने गरेको छु । छँदैछ त्यो बानी अझ पनि । अब ता बूढो भइयो यो काम छाडौं भन्यो बाटामा वा कतै युवतीहरू भेटिए भने नचाहेर पनि मेरा आँखा अहिले पनि पुलुक्कको लोभमा भोकाएकै हुन्छन् भन्ने ठानेको छु । कारणवश हेर्न पाइएन भने अलिकति नमिठो लाग्छ । नढाँटीकन भनेको हुँ । ढाँट्ने हो भने यो कुरा भन्ने थिइनँ । अझै भन्छु, त्यसरी भेटिएका वा बाटो हिंड्ने युवतीहरू को हुन्छन् कुनै वास्ता हुँदैन, तर आँखा भने एक पुलुक्कको भोक मेट्न आतुर हुन्छन् । उहिलेदेखि नै बाटाघाटामा हिंड्दाओर्दा युवतीहरू भेटिए भने मेरा मनमा एक प्रकारको उत्सुकता हुन्थ्यो । नढाँटी भन्छु– आउँदै गर्दा नजानिंदो शैलीमा तिनको अग्रभाग पुलुक्क हेर्थें र ऊ मेरा पछि पुगेपछि म पनि पछि फर्किएर उसको पृष्ठभाग पुलुक्क हेर्थें । के हुन्थ्यो र म त्यसरी हेर्थें मलाई अहिले त्यस कुरालाई पूर्णता गर्ने अभिव्यक्तिको संकट छ । कता हो कता एक प्रकारको आनन्द आउँथ्यो, कता हो कता एक प्रकारको मनभरिको कौतूहलता मेटिएको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो । यसबारे पनि म अहिले केही भन्न सक्तिनँ । त्यो एकै झलक वा त्यही एक पुलक्कबाट एक प्रकारको आत्मिक तृप्ति हुन्थ्यो क्यारे यतिसम्म भन्नु पर्ला ।
नारीहरूको मनका बारेमा ता मलाई उति थाहा छैन । उनीहरूमा पनि यो प्रक्रिया हुँदो हो भन्नेसम्म अनुुमान गर्दछु । उनीहरू पनि मेरा जसरी वा यही युवकको जसरी कुनै युवकलाई नियाल्छन् वा नियाल्दैनन् एउटा अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । मलाई के थाहा छ भने नारीहरू पनि पुरुषहरूलाई आफूतिर आकृष्ट गर्ने गतिविधिमा पर्याप्त मात्रामा लागेका हुन्छन् भनिन्छ । तर पुरुषहरू भने नारीशरीरको आकृति मात्र हेरेर आपूmभित्र कतै आत्मिक आनन्दको अनुभव गर्दछन् भनिन्छ । होला । एक झलकबाट मात्र उनीहरू तत्कालीन भोकबाट अघाउन चाहन्छन् । अलिकति सुन्दरता पिएर मात्र पनि तृप्त हुन चाहन्छन् र हुन्छन् पनि । म पनि त्यही हुँ । तिमीलाई एकै पटक यसरी हेर्दैमा कुनै मान्छे अघाउँछ भने हेर्न देऊ के फरक पर्छ ? एक झलक आँखा लगाउँदैमा तिमीलाई उसले खाइहाल्दैन, चिथोरिहाल्दैन, निमोठिहाल्दैन क्यारे ! मलाई मेरी श्रीमतीलाई यसै भन्न मन लाग्छ । ‘उसका आँखाले तिम्रो सुन्दरता तानेर आफूमा लुकाउँदैन । त्यसैले ऊ तिमीलाई हेर्न चाहन्छ भने तिमी उसलाई अघाउँजी हेर्न देऊ । आखिर उसले ता हेर्ने मात्र त हो नि, परबाट हेर्दा केही बिग्रने होइन क्यारे ! आखिर पुलुक्क हेर्नु ता हो नि एक पुलुक्कले के फरक पार्छ ? तिम्रो सुन्दरता वा आकारले कुनै मान्छे परितृप्त गराउँछ भने गरोस् आत्मतृप्ति । हेर्न देऊ’ मेरा मनमा ता यसो पनि भनिदिऊँ जस्तो लाग्यो । तर सामाजिक लोकलज्जाका कारण यसो भन्न सक्तिनँ, भन्न पनि मिलेन । यसो भनियो भने हाम्रा माझमा एउटा पर्खाल बनिन सक्छ । यही भयले मैले मनमा आएका कुरा भनिनँ । नभन्नु नै श्रेयष्कर ठानें ।
तैपनि मन मिचेरै भन्छु–‘हेर्न देऊ । तिमी भर्खरकी जवान छ्यौ र न कसैले तिमीलाई हेर्दछ, दाँत फुक्लेकी, कपाल फुलेकी, मखिया परेकी र कुरूप कुप्री परिसकेकी भए तिमीलाई कसले हेथ्र्याे ? यो मनोविज्ञान हो, यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु नै राम्रो हो ।’
उनको प्रतिक्रिया के थियो मलाई उति फुम छैन ।
हो, युवाकालको वास्तविकता नै यही हो । यो सीमासम्मको गतिविधिलाई नकार्नु पनि हुन्न भन्ने ठान्छु आज । वास्तवमा पुरुषहरूको धर्म नै यही हो । पुरुष मात्र किन ? स्त्रीहरू पनि पुरुषहरूको यो धर्ममा अलिकति सहभागी हुन्छन् नै । दुवै पुरुष स्त्री सौन्दर्यलाई पान गर्न चाहन्छन् । मिठो गीत सुन्न चाहन्छन्, गुनगुनाउन चाहन्छन् । मिठो भाका हाल्न चाहन्छन् । उनीहरू सौन्दर्यलाई उपभोग गर्न खुबै चाहन्छन् । यो कुनै एक युवामा र युवतीमा मात्र लागु हुने विषय होइन, यो त चिरन्तन हो । यसमा मनोविज्ञान लुकेको छ, यसमा यौनविज्ञान पनि अलिकति लुकेको छ । यहाँ लुकेको यौनविज्ञान प्रबल भयो भने समाज भताभुङ्ग हुन सक्छ र दुर्बल रहेसम्म समाज स्वस्थ नै रहन्छ । प्रौढ भइसकेको भए पनि म आफू पनि त्यही ड्याङ्को मूला न हुँ । म पनि ता त्यही युवकको जस्तो व्यवहार नजानिदो पारामा गरिरहेको हुन्छु । आफैं भित्र यस्ता केही दार्शनिक विचार सोचिरहेको वेला कता कता मेरो मन मेरा युवाकालतिर फर्कियो ।
युवाकालमा म पनि सौन्दर्यलाई पान गर्न निकै चाख मान्थें । तर मैले सीमालाई अतिक्रमण कहिल्यै गरिनँ । त्यस क्रममा मैले पोखरा गएर माछापुच्छ«ेको अवलोकन गरिनँ कि, नैनिताल गएर त्यहाँको सौन्दर्यलाई नजिकैबाट चाखिनँ कि, गोवा गएर त्यहाँका निर्वस्त्र समाजको दर्शन गरिनँ कि के मात्र गरिनँ मैले ? आफूमा पहँुच हुँदो हो त म विदेश पनि जाने थिएँ यस कामका लागि । मलाई अझै भनिदिन मन लाग्छ, तिमीमा भएको सौन्दर्यको पान गरिरहेको हो उसले । यसमा तिमीले तबसम्म रिसाउनु पर्दैन जबसम्म उसले तिमीमाथि यस कामका नाममा आक्रमण गर्दैन ।
जबसम्म फुलेको फूलले नडराए हुन्छ जबसम्म त्यसलाई चुँड्न हात बढ्दैनन् । हो, सौन्दर्यका लोभीहरूबाट आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नाले असामाजिक र अमर्यादित क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । समस्या त्यत्ति नै हो । अलिक नियन्त्रण गर्न नसक्नाको परिणाम नै ठुला ठुला दुर्घटना हुने गरेका छन् । यस मानेमा तिमीले डराए हुन्छ यदि यही कारणको बुझाइबाट तिमी डराएको भए त्यसलाई म जायजै मान्छु । तर आँखा नै बन्द गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । कुरा कति भने यसलाई नियन्त्रण गरेर उपभोग गर्नुपर्छ । सौन्दर्य ता आफूभित्र र आफैंसँग पनि हुन्छ, त्यसको पारख अरुले नै गर्छन् । आफूमा भएको सौन्दर्यको एक नजर वा एक पुलुक्कमा कसैले पारख गरेर पान गर्न चाहन्छ भने त्यो कुन ठुलो गल्ती भयो र ? सर्पका साथ मणि हुन्छ भनिन्छ, तर त्यसको महत्व उसलाई थाहै हुन्न । श्रीखण्ड चन्दनको ता रुखै महकाउँछ, तर उक्त चन्दनको रुखले आफ्नो महक आफूले उपभोग कहिल्यै गर्दैन । कस्तुरी मृग आफ्नै नाभीबाट फैलिएको सुगन्धबाट विमोहित भएर सारा जंगल भौंतारिन्छ । तर आफूसँगै भएको सुगन्धको बोध नभई ऊ समाप्त हुन्छ । यस कारण हामीले आफूसँग भएको सौन्दर्य, आफूमा भएको योग्यताको कदर समाजले गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा किन लिने ? के कस्तुरी झैं हामीले पनि आफूलाई समाप्त गर्ने ? अझ एकै नजरमा वा एकै पुलुक्कमा कसैले हामीभित्रको सौदर्यको पारख गरेर आत्मतृप्ति लिन सक्छ भने बाधा नपु¥याउँदा के हामीलाई हानी नै होला त ? मलाई ता हानी नै भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन । यसैले हामीले त्यस्ता पारखीलाई हामीमा भएको सौन्दर्य निर्बाध गर्न अवलोकन गर्न दिन सक्नुपर्छ, जो सामाजिक सीमाभित्र रहँदै उपभोग गरोस्, हामीभित्र भएको सौन्दर्यलाई सीमाको अतिक्रमण नगरीकन पान गर्न दिनु कुनै ठुलो गल्ती हो र ?
तर यी कुरा सामाजिक लाजगालका कारण म मेरी श्रीमतीका अघि सहज रूपमा राख्न सक्दिनँ । लाज सरम पनि केही कुरा हो । लाज सरम राखिएन भने न घर घर रहन्छ न परिवार नै परिवारका रूपमा रहन्छ । यसै कारणले पनि मैले मनमा आएको कुरालाई सहज रूपमा अघि राख्न सकिनँ ।
सबै मान्छे एकनासका नभएझं सबैको विचार पनि एकनासको हुन्न । मेरै विचारमा पनि अरुको विचार भन्दा केही फरक रहेको म आफैं अुनभव गर्दछु । हो, मेरै विचार पनि सबैको भन्दा केही फरक छ । वास्तवमा म भन्छु— जहाँ सुन्दरता छ त्यहाँ त्यसको पारख गर्नेहरू पनि हुनुपर्छ । अनकन्टारको जङ्गलमा फुलेको गुलाफको कुनै काम छैन । अनकन्टारको जङ्गलको चन्दनको महकको कुनै अर्थ छैन । पारखी भएन भने सुन्दरताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
सुन्दरताको पारखीलाई त्यसको पहिचान गर्न एक झिमिकको हेराइ नै पर्याप्त हुन सक्छ, लामो समय लगाएर उसले आकलन गरिरहुनै पर्दैन । एकै पुलुक्क नै सौन्दर्यको उपासकका लागि काफी !